ARM & BOOM Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshad ARM & BOOM
Bonovo Extension Arm waxay ku habboon tahay hawlgallo fara badan oo kala duwan waxayna kuu oggolaaneysaa inaad wax ka qabato mashaariic horay ugu baahnaan lahaa god dheer oo laga qodo.
Waa ku xirnaanta kama dambaysta ah ee hawlwadeennada leh shaqo dheer oo ay qabtaan laakiin aan doonaynin inay ku bixiyaan lacagta lacag-qodista-dheer.
Bonovo Two Section Long Reach Boom iyo Arm waa nooca ugu caansan ee Boom iyo Arm.By kordhinta kororka iyo cududda, waxaa loo isticmaali karaa inta badan xaaladaha shaqada gaaritaanka. , Gacan dheer * 1, baaldi * 1, silsilad baaldi * *, H-Link & I-Link * 1 go'an, tuubooyin & tuubbooyin.
Bonovo Rock Arm iyo Boom oo leh xoog qodis xoog leh oo si weyn loogu isticmaalay macdanta, dhismaha wadada, dhismaha guryaha, dhismaha carrada la qaboojiyey iyo noocyada kale ee mashaariicda. xaaladda shaqada.
Bonovo Telescopic Arm sidoo kale waxaa loo yaqaanaa garabka foosto. Qaybta hore waa jidh go'an, inta soo hartay waa meydad dhaqdhaqaaq leh. Dhammaan meydadka dhaqaaqa waxaa lagu rakibay jirka go'an. Mashiinka istaroogga waxaa loo isticmaalaa in lagu dheereeyo ama laga laabto, waxaa guud ahaan loo adeegsadaa qodista godadka qoto dheer ama howlaha sare.
Bonovo Three Section Long Reach Boom & Arm sidoo kale waxaa loo yaqaan boom & arm burburin. Iyada oo leh saddex qaybood oo ulo ah, kala duwanaanta shaqadu way ka weyn tahay, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon xaaladaha shaqada duminta. Saddexda qaybood ee kor u kaca iyo gacanku wuxuu ka kooban yahay: kor u kac dheer * 1, cudud dheer, 1, ul dhexe, 1, silsilad baaldi ah * 1, dhululubada gacanta * 1, H-link & l-link *! dhigay, tuubooyin & tuubbooyin.